IINDLELA EZISIBHOZO ZOKWENZA UKUBA IKHOMPYUTER YAKHO IHLALE IXESHA ELIDE - ITEKNOLOJI
Iindlela ezisibhozo zokwenza ukuba ikhompyuter yakho ihlale ixesha elide
Iikhompyuter lutyalomali olukhulu. Njengazo naziphi na iindleko, kusengqiqweni ukusebenzisa olona khompyutha lwakho. Ukugcina izixhobo zakho zekhompyutha kungcungcutheka iminyaka embalwa kuya kuthetha izinto ezintle kwezemali nakwimpilo yakho. Nazi iimbono ezisibhozo zokunceda ikhompyuter yakho ihlale isempilweni kwaye ihlala ixesha elide.
1. Yigcine i-Inshoved kwaye iCocekile
Uthuli kunye nokungcola yeyona nto imbi kakhulu kuwe. Enye yeendlela ezilungileyo zokugcina ikhompyuter yakho isebenza ixesha elide kukuyigcina icocekile. Uthuli kunye neenwele zasekhaya zinokukhulisa iigiya kwaye zibangele imiba ekusebenzeni. Khumbula ukuyicoca ikhompyuter yakho kwaye uyigcine igqunyiwe xa ingasetyenziswa ukuthintela uthuli kunye nobumdaka ekungeneni kwizinto zangaphakathi. Sebenzisa umoya onkonkxiweyo ukususa inkunkuma, ngakumbi kubalandeli. Ukuba abalandeli bavalwa kukungcola okuninzi, banokucotha kwaye bangasusi ubushushu kwikhompyuter, babangele ukuncibilika kwangoko. Coca isikrini sakho ngesicoceko sescreen, ungaze ucoceke ngefestile, njengoko i-ammonia iyakwenza buthuntu isikrini. Kwakhona, ungatyi ukutya okanye ubeke iziselo ecaleni kwekhompyuter yakho ngezizathu ezifanayo. Ingozi enye inokuba neziphumo ezibi.
2. Yigcine ipholile
Ubushushu bukwabangela imiba emininzi. I-CPU yakho kunye nekhadi lemizobo lishushu kakhulu, banokupheka. Ikhompyuter ivelisa ubushushu xa isebenza. Xa udibanisa oko kunye neqondo lobushushu egumbini, ikhompyuter yakho isebenza nzima kwaye iyacotha. Zama ukubeka ikhompyuter yakho kwigumbi elicocekileyo elihlala lipholile kwaye lingangeni elangeni. Ukubonelela ngokuhamba komoya okufanelekileyo kwaye ungafaki nantoni na phambi kwabalandeli kwiPC yakho. Kwakhona, coca abalandeli bakho beCPU ukuze baqiniseke ukuba baqhuba kakuhle kwaye basusa ubushushu ngaphandle kwekhompyuter. Unokongeza iifeni ezongezelelweyo kwiPC yakho okanye usebenzise indawo yokupholisa yelaptop yakho.
3. Gcina ngoku
Ngelixa ezo hlaziyo zinokubonakala ngathi zintlungu xa uzama ukwenza umsebenzi, ziyimfuneko kulondolozo lwenkqubo yakho. Ukuba unayo ikhompyuter ye-Apple, uhlaziyo aluyi kuhlaziya ikhompyuter yakho kuphela, kodwa luyayikhusela inkqubo. Ukuba unayo iPC, kuyakufuneka uyenze into yokuzikhusela kwaye ucoce idiski ngesandla (ubuncinci kube kanye ngenyanga). Ungayibeka ukuba isebenze ebusuku ukuze ingaphazamisi umsebenzi wakho. Kwakhona, ukuba unayo iPC, gcina isoftware yakho ye-antivirus ihlaziywa.
Ngelixa ikhompyuter isebenza, licebo elilungileyo ukungayihambisi. Ukuba unelaptop, khumbula ukuba ungadibanisi okanye uyihambise ngaphezulu kokufuneka. Yiba nobulali. Ukuhamba kakhulu kunokonakalisa iziqwenga ezihambayo kwaye kubangele umba kamva. Kwakhona, ukuba unayo ilaptop, yibambe kwisiseko sayo, ungaze ngescreen, kwaye usebenzise izandla zombini. Xa uhamba nelaptop, tyala imali kwimeko enamacala.
5. Ukukhusela uMkhuseli
Qiniseka ukuba ukhusela ikhompyuter yakho ngesikhuseli sokukhusela ukuthintela i-hard drive yakho. Kwakhona, xa kukho izaqhwithi, vula ikhompyutha njengelinye ukhuseleko. Kuthatha nje into enye eshushu, kwaye uza kuthenga ikhompyuter kwakhona.
6. Qiniseka ukuba unayo i-RAM kunye ne-Hard Drive Space
I-RAM yakho (imemori yokufikelela ngokungacwangciswanga esetyenziselwa iinkqubo ezisebenzayo) kunye nehard drive yakho (esetyenziselwa izinto ozigcina njengeevidiyo, amaxwebhu kunye nemifanekiso) kufuneka zikumanqanaba afanelekileyo ukuhlangabezana neemfuno zakho. Ukuba usebenze kakuhle kwikhompyuter, kunokwenzeka ukuba bakunike ubuncinci bememori kunye nendawo yehard drive. Ungahlaziya imemori ngokulula, kwaye ikhompyuter yakho ibaleke ngokukhawuleza kwaye ihlale ixesha elide.
7. Iidrives zikarhulumente eziQinisekileyo ziPhuculo olufikelelekayo lokunyusa ixesha elide
Enye yeendlela ezilungileyo zokuhlaziya ikhompyuter kunye nokwandisa ubomi bayo kukutshintsha i-hard drive nge-solid state drive. Iidrive ezintsha eziqinileyo zikarhulumente ziyafikeleleka ngoku. Azinazinto zishukumayo kwaye zibaleke zipholile kakhulu kuneediski eziqhelekileyo. Kananjalo baya kwandisa isantya sokuqalisa, kwaye uya kuqaphela impendulo ekhawulezileyo kwikhompyuter yakho iyonke.
8. Musa ukuyiphatha ikhompyuter yakho njengokuKhanya kokuKhanya
Ngaphandle kokuba kufuneka ugcine ikhompyuter yakho isebenza ngalo lonke ixesha, unokufuna ukuyicima ikhompyuter yakho xa ingasetyenziswanga ukugcina iindleko zamandla. Ukuyicima kube kanye ngemini (njengasebusuku) kulungile. Nangona kunjalo, ngokuqhubeka unika amandla kwaye ucime amaxesha ngamaxesha ngemini uxinzelela izinto njengoko utshintsha ubushushu ngaphakathi kwenkqubo, obangela ukuba ikhontrakthi isebenze kwaye yande. Zama ukunciphisa olu xinzelelo. Inkqubo yakho iya kuhlala ixesha elide.
Njengemoto, xa usenza ulondolozo oluqhelekileyo kwaye uphatha ikhompyuter yakho ngononophelo, uya kuthi ucofe iminyaka embalwa eyongezelelweyo kwinkqubo. Xa uqwalasela iindleko zeekhompyuter, iyavakala into yokuba utyale imali kwiinzame ezimbalwa ezongezelelweyo zokolula imali yakho kude kwaye ufumane ubungakanani obongezelelweyo kunye nobungakanani kwinkqubo yakho.
uxinzelelo oluphantsi imisebenzi yexeshana
kuchaphulo olu malunga nolonwabo kunye nokumomotheka
indlela yokwakha izakhono zonxibelelwano
Olona hlobo lokuzilolonga ukuze ulahle amanqatha angasemva
Ngubani ekufuneka ndimlandele ku-twitter
30 Into Umthetho Wabucala Kofu Imveliso Imvelisogadget